Calcium na zinc na -eme ka ahụ sie ike
A na -ekekarị ndị na -eme ka calcium na zinc guzosie ike na calcium siri ike na ndị na -eme ka zinc na calcium calcium na zinc.
Calcium zinc stabilizer na -agwakọta site na usoro ihe mejupụtara pụrụ iche na nnu calcium, nnu zinc, mmanu na antioxidant dị ka isi components.Ọ nwere ike ọ bụghị naanị dochie ndị na -eme ka ihe na -egbu egbu dị ka Pb, sald Cd na tin organic, kamakwa nwee nkwụsi ike dị mma, nkwụsi ike ọkụ, Omume egosila na na ngwaahịa resin PVC, ihe nhazi dị mma, nkwụsi ike nke ọkụ na-eduga nzere nnu, bụ ezigbo ihe nkwụsi ike na-adịghị egbu egbu.
Site na usoro nhazi resin PVC nwere ezigbo mgbasa, ndakọrịta, nhazi mmiri, mmegharị sara mbara, imecha elu dị mma; ezigbo nkwụsi ike ọkụ, obere hue mbụ, enweghị oke mmiri ozuzo; enweghị ọla dị arọ na ihe ndị ọzọ na -egbu egbu, enweghị ihe omume vulcanization; oge nnwale ọbara ọbara Congo. dị ogologo, nwere mkpuchi ọkụ eletrik mara mma, enweghị mmerụ, yana nguzogide ihu igwe dị mma; oke ngwa, arụmọrụ siri ike, obere oriri, yana ịdị n'otu; Na ngwaahịa ọcha, ịdị ọcha dị mma karịa ngwaahịa ndị yiri ya.
Ihe dị iche iche, nkọwapụta na ojiji
Dabere na ojiji dị iche iche, CZ-1, CZ-2, CZ-3 compound stabilizer nwere ụdị dị iche iche: CZ-1, CZ-2, CZ-3, wdg, n'otu n'otu maka ọkpọkọ, profaịlụ, akwa ọkpọ, mpempe akwụkwọ, ịkpụzi injection. , ịfụ ịkpụzi film, cable ihe na ndị ọzọ plastic ngwaahịa.
Ch400, CH401, CH402 calcium zinc compound okpomọkụ stabilizer bụ ụdị nchekwa gburugburu ebe obibi na ịrụ ọrụ nke ọma multi-ọtọ mmiri calcium zinc compound okpomọkụ stabilizer.Enwepụ okpomoku siri ike na nghọta, ejiri na ngwaahịa PVC agaghị emepụta oke mmiri ozuzo na ihe mbugharị, yana okpomọkụ na-eguzogide. mmanụ, epoxy methyl ester, mmanụ soybean epoxy na mmetụta ka mma. Kwesịrị ekwesị maka nhazi slurry PVC, nke a na -ejikarị na plastik, mkpuchi plastik, na -amụnye teknụzụ nhazi PVC.
Ngwaahịa a abụghị naanị nwere ezigbo ndakọrịta yana njikwa viscosity, mana ọ nwekwara ike nye agba agba mbụ na njigide ụcha. Ọ dabara maka ngwaahịa PVC dị ka ọkpọkọ dị nro, granulation, ihe nkiri kalenda, ihe egwuregwu ụmụaka, eriri ebu, akwa mgbasa ozi, akwụkwọ ahụaja na ihe ndị ọzọ.
(1) Ọ nwere ike dochie ihe na-eme ka ihe gbanye gbam gbam gbam gbam wee bute ihe nkwụcha nnu iji gboo mkpa ahụike gburugburu ebe obibi nke eriri na eriri na-adịghị egbu egbu;
(2) nwere ezigbo ọcha ọcha na nkwụsi ike ọkụ, iguzogide mmetọ vulcanization;
(3) nwere ezigbo mmanu na mmetụta njikọ pụrụ iche, na -enye ihe nzacha dị mma, welie ngwugwu ahụ na resin, melite arụmọrụ ngwaahịa, belata ihe eji arụ ọrụ, mee ka ndụ akụrụngwa dị ogologo;
(4) ma ịgbasi ike na ịkwalite ịgbaze, plasticizing fluidity dị mma;
(5) nwere ike inye ngwakọta PVC ezigbo plasticizing edo edo na agbaze agbaze dị elu, nke mere na elu ngwaahịa a dị larịị.
2-5phr nke ngwakọta niile
Nke gara aga: Sjsz Series Conical Twin Screws Extruder - Ruiqun
Osote: Usoro ngagharị
Na -akụpịa igwe ihe, Onye Wpc Extruder, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Nweta Wpc,